SAWIRRO: Rag hubeysan oo weeraro ka geystay caasimadda dalka Austria iyo ciidanka xoogga oo la howl-geliyay – Calanka.com
SAWIRRO: Rag hubeysan oo weeraro ka geystay caasimadda dalka Austria iyo ciidanka xoogga oo la howl-geliyay
Koox hubeysan ayaa xalay weeraro lagu tilmaamay kuwo argagixiso xalay ku qaaday goobo kala gaddisan oo ka tirsan caasimadda dalka Austria ee Vienna.
Ilaa iyo iminka waxaa la xaqiijiyay dhimashada sadde ruux oo mid ka mid ah uu yahay raggii weerarka soo qaaday, waxaana wali socda howlgalka ay isaga soo horjeedaan ciidamada ammaanka iyo kooxaha weerarka soo qaaday.
Weerarka ayaa la sheegay in uu ka bilowday xaafadda Seitenstettengasse ee bartamaha magaalada Vienna, waxaa jooxda hubeysan oo markii dambe is qeybiyay bilaabeen in ay toogtaan dadka hareerohooda joogay.
Waxaa la runeysan yahay in wali ay magaalada ku jiraan 1-2 rag oo hubeysan, waxaana masuuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in la howlgeliyay ciidanka qaranka si ay usoo afjaraan, una sugaan amniga caasimadda.
Wixii kusoo kordha kala soco Calanka.